मुख्यमन्त्रीले राउतले बोलाए आकस्मिक बैठकः के हुन्छ मन्त्रीलाई ? « Janata Samachar
मुख्यमन्त्रीले राउतले बोलाए आकस्मिक बैठकः के हुन्छ मन्त्रीलाई ?
जनकपुरधाम । प्रदेश अर्थमन्त्री र सचिवबीचको कुटपिटको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्ती लालबाबु राउतले कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव र वन, पर्यटन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव बिद्यानाथ झाबीच भएको कुटपिटको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुख्यमन्त्री राउतले समस्या समाधानका लागि पहल थाल्नुभएको हो ।
घटनाबारे छानबिन गर्न गठित तीन सदस्सीय छानबिन टोलीले छानबिन शुरु गरेको छ । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव वेचनकुमार महतोले २४ घण्टा भित्र दोषिलाई कार्यवाही गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार भएको घटनाको बिषयमा मन्त्री यादवले घटनामा आफुले कुनै किसिमको हातपात नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । आफूले सिफारिस गरेको एनजिओलाई कार्यक्रम नपारिदिएको झोंकमा मन्त्री यादवले सचिव झालाई आइतबार झापड हिर्काएका थिए ।
तर, मन्त्री यादवले भने आफ्नो कार्यकक्षमा सचिवले सभामुखकै अगाडि अभद्रता देखाउँदा ‘भनाभन’ मात्र भएको दाबी गर्नुभएको छ । सचिव झा आइतबार रातीदेखि जनकपुरस्थित मेडिकेयर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ । झाको हत्केलामा चोट लागेकाले ब्याण्डेज लगाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेल
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्ती लालबाबु राउत
वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव बिद्यानाथ झा